အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: V Day 2012
TA DA .............!
အိတ်ကတော့ နှစ်အိတ်နော် ကဲ ဘာတွေပါမလဲ ကြည့်ကြရအောင်.... အသေးလေးကတော့ ဟုတ်ပါတယ် တီက မောင့်ကို ပေးတဲ့ ဗီဒေး လက်ဆောင်ပါ။
မောင်ပေးတာကို ကြည့်ကြရအောင်နော်............ဗူး ကြီးကြီးနဲ့လာပါတယ်။ ဖောက်လိုက်တော့ ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ ဗူးက သူ့ဗူး အစစ် မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဗူး ရှာမတွေ့တာနဲ့ ရှိတဲ့ လက်ဖက်ခြောက်ဗူး နဲ့ ထုပ်ပေးလိုက်တာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ တီချမ်း လိုချင်နေတာ ကြာလှပြီဖြစ်တဲ့ ကော်ဖီနှပ်တဲ့ ဘီကာ ခွက်ကလေးပါ။ လက်ကိုင်ပါတယ်။ စတားဘတ်ခ်က ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဈေးကြီးတယ် ထင်လို့ (မတန်ဘူးထင်လို့) မဝယ်ခဲ့တာပါ။ ခုတော့ သူများဝယ်ပေးတော့ တန်တန် မတန်တန် ကိုယ့်အလုပ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် သုံးစွဲဖို့ ကသာ ကိုယ့်အလုပ် ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ ကဲ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲကြွား အဲလေ.......တော်ပြီလေနော်။
Anonymous February 15, 2012 at 5:54 AM
Tell me now ... Tell me now....
How you have lost weight ....
Myint Thi February 15, 2012 at 8:53 AM
ခရစ္စတလ် February 15, 2012 at 9:14 AM
ဝတာလည်း မဟုတ်ပဲနဲ့ ဝိတ်တွေ ချနေတယ်တော့။
လှဖို့ အရေးမကြီးဘူး၊ ကျန်းမာဖို့အရေးကြီးတယ် :)
တီချမ်း February 15, 2012 at 11:16 AM
အနော ရေ ရေးပေးမယ်လေနော် ခဏစောင့်
ဟုတ်တယ် တီတင့်ရေ နည်းနည်း ပိန်သွားတယ် ပိန်သွားဆို ၁၀ ပေါင်လောက်ကို ကျသွားတာကို
ဒေါ်သလင်းရေ တမင်ချ တာ မဟုတ်ပါဘူး ယောက်ျား နှိပ်စက် လို့ စိတ်ဆင်းရဲပြီး ကျတာပါ ဟိ
Waiting for your slimming post!!
ချစ်ကြည်အေး February 15, 2012 at 3:59 PM
လူကလှရက်နဲ့ ဆံပင်ပုံကြီးက ဖျက်နေတာအေ။ ဆံပင်နဲနဲ ရှည်တာက တီချမ်းနဲ့ ပိုလိုက်တယ်။ အရှည်ထားဦးနော်။
အားကျတယ်၊ သူများတွေ ချစ်ကြ ခင်ကြတား)))
Evy February 15, 2012 at 4:30 PM
ယောက်ျား နှိပ်စက် လို့ဆိုပဲ မယုံရေးချမယုံ။ မချစ်ပြောသလိုပဲ ဆံပင် အရှည်နဲ့ပိုလိုက်တယ်။ ခုဆံပင်က ခုမှတပ်ထဲကထွက်လာသမျိုး။
Sorry ! who is T-chan ? Man or Woman?
I saw Two men in Photo.
တီချမ်း February 15, 2012 at 7:53 PM
ညကျ တင်ပေးမယ် ဝင်ဒီ
ဒေါ်ချစ် မီးက အတိုပဲ ထားတာများတယ် တခါတလေ ရှည်နေတာ မညှပ်ဖြစ်လို့ ခုကေ က ပုံမှန်ပဲ
အီဗီ တကယ်ပြောတာ ယောက်ျားတွေ မကောင်းဘူး
နောက်ဆုံးက အနော နိမတ်စ် ဘယ်ကနေ စရှင်းပြရမလဲတောင်မသိတော့ဘူး
ဟုတ်ကဲ့ တီချမ်း ဆိုတာ အခြောက်ကြီးပါ ဆံရှည်နဲ့ကောင်က သူ့လင်ပါ ကျန်တာတွေ သေချာ ထပ်သိချင်ရင်တော့ ပိုစ့်အဟောင်းတွေရှာဘတ်ပါ လို့ပဲ .....
I like your reply . Don't love too much we jealous.
Vista February 16, 2012 at 12:29 PM
ယောကျာ်းနှိက်စက်တာလား ယောကျာ်းကို နှိက်စက်တာလား တီချမ်းရယ်
တီချမ်း February 16, 2012 at 3:30 PM
အို မဟုတ်တာ နှိပ်စက်စရာလား ချစ်လို့တောင် တုန်နေတဲ့ ကိစ္စ